မောရစ်ရှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း GBC II ကို
မောရစ်ရှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း GBC II ကိုကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ GBL
2019 ၏အဖြစ်, မပို GBC II ကိုအဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။ အသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ဦးကို Global စီးပွားရေးလိုင်စင် (GBL) နဲ့တစ်ဦးမောရစ်ရှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မောရစ်ရှကုမ္ပဏီများမှဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ကြိုတင်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားတွေအကြောင်းဒါကြောင့်အောက်ပါဆောင်းပါးကိုဆွေးနွေးပွဲ။ အသစ်တစ်ခု GBL ဖြစ်ပါတယ်။
မောရစ်ရှအတွက်ကုမ္ပဏီတက်ချိန်ညှိခြင်း မောရစ်ရှအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေပြုခြင်းဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် 2001 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေကိုခေါ်။ ဒီလုပ်ရပ်များ၏သွားတာနှင့်အတူ, မောရစ်ရှခေတ်မီဘဏ္ဍာရေးအချက်အချာနေရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ GBC II ကိုကုမ္ပဏီမောရစ်ရှကမ်းလွန် Non-အခွန်နေထိုင်သူများအပေါ်အလေးပေးသောကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေး Category:2(GBC II ကို) ဧရိယာအောက်မှာကျရောက်ပါတယ်။ GBC IIS မောရစ်ရှအခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောမြောက်မြားစွာကိုနှစ်ချက်အခွန်ကောက်ခံမှုစာချုပ်များကိုဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်မဟုတ်။
မောရစ်ရှအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ 2007 နှင့်ဘဏ္ဍာရေး၏ဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများအက်ဥပဒေ (အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်) 2012 ၏အက်ဥပဒေပါဝင်သည်သြဇာလွှမ်းမိုးအခြားကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေပြဌာန်း။
GBC ငါနှင့် GBC II ကို (GBC 1 နှင့် GBC 2) အကြားခြားနားချက်
အဆိုပါမောရစ်ရှ GBC ငါနှင့် GBC II ကိုအကြားကွာခြားချက်ဟာ GBC ငါဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအဘို့ဖြစ်၏နှင့် GBC II ကိုတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ကြဘူးသူကလူများအတွက်နေသူများကဖန်တီးကြောင်းမော်ရေးရှပ်အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ GBC ဂလိုဘယ်စီးပွားရေးကိုဆိုလိုတာပါ ကုမ္ပဏီ.
အောက်ပါဇယားသည် key ကိုအကျဉ်းချုပ် အဆိုပါမောရစ်ရှ GBC 1 နှင့် GBC2အကြားခြားနားချက်များ.
မောရစ်ရှ GBC ငါ
မောရစ်ရှ GBC II ကို
15% မှာအခွန်ကောက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
နေထိုင်သူတစ်ဦးအတွင်းရေးမှူးရှိရမည် 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်များ / အရာရှိများ / ဒါရိုက်တာလက်ခံနိုင်ဖွယ်။
စာရင်းစစ်အကောင့် file ရှိရမည် စာရင်းစစ်အကောင့်မလိုအပ်ပါဖြည့်စွက်
15-20 နေ့ရက်ကာလ၌ Filed ပုံမှန်အား5ရက်အတွင်း Filed
ရိုးရှင်းဘို့, GBC II ကိုကုမ္ပဏီကဒီရှင်းပြချက်ထဲမှာမောရစ်ရှကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပါလိမ့်မည်။
မောရစ်ရှယခင်က 1968 အတွက်လွတ်လပ်ရေးရရှိရန်နှင့်ထို့နောက်ဓနသဟာယလာရောက်ပူးပေါင်းတစ်ဦးကိုဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အစိုးရသည်ဗြိတိသျှစတိုင်အောက်ပါတစ်ဦးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မူလတန်း language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မောရစ်ရှတစ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း၏ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လင့်ခ်အထက်တွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းတဦးနှင့်အတူအသေးစိတျဆှေးနှေးဖို့ဒီစာမျက်နှာပေါ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံသို့မဟုတ်နံပါတ်ကိုအသုံးပြုဖို့အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ website ၏အမိန့်ပုဒ်မသွားရောက်ကြည့်ရှု။
သီးသန့်လုံခြုံရေး: ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များတိုးမြှင့်ရဲ့ privacy နဲ့လျှို့ဝှက်ပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်အားလုံးအများပိုင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်မှတ်ပုံတင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမှခန့်အပ်ထားသောနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးမော်ရေးရှပ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏အကျိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုအဘယ်သူမျှမထုတ်ဖော်ရှိပါတယ်။
တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ & ရှယ်ယာရှင်များ: လူတစ်ဦးတစ်ဦးမော်ရေးရှပ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်နှင့်လုံးဝ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေလိုအပ်အဖြစ်ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အတွင်းရေးမှူးမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦး လူတစ်ဦးမောရစ်ရှကုမ္ပဏီ ဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဒါရိုက်တာ & ရှယ်ယာရှင်များမှာ: အဲဒီမှာမောရစ်ရှ၏သဘာဝအနိုင်ငံသားများဖြစ်ဖို့ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များဖြစ်စေမလိုအပ်ချက်များကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
အနိမ့် Authorized Capital ကိုအဘယ်သူမျှမ: ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူက start-ups မောရစ်ရှများတွင်ထည့်သွင်းရန်အဘို့အကိုမှန်ကန်စေသည်။
နိုင်ငံခြားသား Friendly: မောရစ်ရှရှိစီးပွားရေးလုပ်ဖို့နိုင်ငံခြားသားများနှင့်၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီများအဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့တည်ငြိမ်, ဖော်ရွေအစိုးရရှိပြီးကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖိတ်ခေါ်ခဲ့။
ကော်ပိုရိတ်အစုရှယ်ယာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: မောရစ်ရှမှတ်ပုံတင်ထားသောရှယ်ယာနှင့်ထိုကဲ့သို့သော, ဦးစားပေးရှေးနုနှင့်ဒဿမကိန်းကဲ့သို့အခြားရှယ်ယာအမျိုးမျိုးခွင့်ပြုပါတယ်။
အစာရှောင်ခြင်းထဲဆွဲသွင်းပါဝင်: တစ်ဦးမော်ရေးရှပ်ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်မြန်ဆန်ထိရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ဖြည့်စွက်ဖို့တစျခုလုံးကိုအချိန်အဖြစ်အနည်းငယ်သာသုံးအဖြစ်နေ့ရက်ကာလ၌လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
မောရစ်ရှကော်ပိုရေးရှင်း၎င်း၏အမည်ကိုအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်း၏တည်ရှိမှုကိုဆိုလိုကြောင်းအသုံးအနှုန်းအသုံးပြုရမည်။ ဤစကားများပါဝင်သည်: လီမိတက်, ကော်ပိုရေးရှင်း, ဆွဲသွင်းပါဝင်, နှင့်ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအတိုကောက်။
မောရစ်ရှကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ process ကို server ကို request များနှင့်ဥပဒေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များများအတွက်ဒေသခံရုံးလိပ်စာနှစ်ခုလုံးရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။
တစ်ဦး Category:2ဂလိုဘယ်စီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်တစ်ဦးကကော်ပိုရေးရှင်းဟာမောရစ်ရှအစိုးရမှ၎င်း၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမြတ်အစွန်းပေါ်မဆိုအခွန်ပေးဆောင်ရန်မထားဘူး။
ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေး£ 899 ဖြစ်ပါသည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်မှတ်တမ်းများကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားစာရွက်စာတမ်းများ, သို့သော်အများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးကမောရစ်ရှကော်ပိုရေးရှင်းတိုးမြှင့် privacy ကိုများအတွက်ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများကိုခနျ့အပျနိုငျသညျ။
ဤရွေ့ကားမှတ်တမ်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရင်းကိုင်, မိနစ်တွေ့ဆုံတစ်အဖွဲ့ဝင်များက '' မှတ်ပုံတင်နှင့်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အရာရှိများ၏စာရင်းကိုပါဝင်သည်။
တစ်ဦးကမောရစ်ရှကော်ပိုရေးရှင်းဟာမောရစ်ရှအခွန်ဝန်ကြီးဌာနအာဏာပိုင် (မြ) မှတစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်အခွန်ပြန်လာ file ရန်, မလိုအပ်ပါ။
တစ်ဦးကမောရစ်ရှကော်ပိုရေးရှင်းဖြည့်စွက်ဖို့မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အကြောင်းကိုသုံးရက်စောင့်ဆိုင်းမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည် turnaround အချိန်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏မှတ်ပုံတင်အမည်ဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးတင်ပြနှင့်ဘယ်လိုတိကျစွာသူတို့ကကော်ပိုရိတ်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်အပေါ်အခြေခံသည်။
သင်, privacy ကိုကမ်းလှမ်းရာလျင်မြန်စွာတစ်ဦးမော်ရေးရှပ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်လူတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကော်ပိုရိတ်အခွန်များနှင့်နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။